Pope Francis rịọrọ ka enye iwu ka ọ ga n'ihu ịgbasa nsọpụrụ St. Michael Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi | AKW CHKWỌ AKWCHKWỌ
Pope Francis rịọrọ ka enye iwu ka ị ga n'ihu ịgbasa nsọpụrụ St. Michael Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi
Paolo Tescione	Edere ya Septemba 29, 2020 Septemba 29, 2020
Pope Francis gbara ndị ụka ụka ụka ume ka ha gaa n'ihu na-akwanye nsọ nye St. Michael Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi.
N’ozi ha wepụtara na Septemba 27, Popu kelere ndị otu Congregation of St. Michael the Archangel na narị afọ na-abịa nkwado ha site n’aka ndị isi ụka.
"Enwere m olileanya na Ezinaụlọ gị nwere ike ịga n'ihu na-agbasa apostolate nke St Michael Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi, onye mmeri dị ike nke ikike nke ihe ọjọọ, na-ahụ na nke a nnukwu ọrụ ebere maka mkpụrụ obi na ahụ", o kwuru na ozi edepụtara na July 29 ma gwaa p. Dariusz Wilk, onyeisi ndị isi nke ọgbakọ ahụ.
Onye Polish gọziri Bronisław Markiewicz guzobere ọgbakọ a makwaara dịka Ndị Fada Michael, n'afọ 1897. Ọ chọrọ ịgbasa ofufe nye onyeisi ndị mmụọ ozi, na-agbaso nkuzi nke St. John Bosco, onye guzobere ndị Sale, onye ya na ya sonyere afọ 10 gara aga.
Popu ahụ kwuru na Markiewicz nwụrụ na 1912, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri tupu Archbishop Adam Stefan Sapieha nke Krakow nabatara ụlọ akwụkwọ ahụ na Septemba 29, 1921.
O toro ndị otu ahụ maka ibi ndụ ihe nketa mmụọ nke onye guzobere ya, "jiri amamihe were gbanwee ya na eziokwu na mkpa ọhụụ ọhụrụ." O chetara na mmadụ abụọ n'ime ha - Wọọrọ Władysław Bńdziński na Adalbert Nierychlewski - so na ndị Poland nwụrụ n'ihi okwukwe nke Agha Worldwa nke Abụọ.
O kwuru, sị, "Ohere gị, nke dị mkpa karịa mgbe ọ bụla, bụ nke metụtara nchegbu gị maka ụmụaka dara ogbenye, ụmụ mgbei na ndị gbahapụrụ agbahapụ, onye ọ bụla na-achọghị ya ma na-elekarị ndị ọha mmadụ tụfuru anya.
Ọ gbara ha ume ka ha rapara na ụkpụrụ iwu, "isnye dị ka Chineke?" - putara okwu Hibru nke “Maikel” - nke o kowara dika “nkpu mmeri nke St Michael onye isi ndi mo ozi ... nke na echebe mmadu site n’inwe ọdịmma onwe onye”.
Ọ bụghị oge mbụ na Pope Francis gosipụtara na ofufe nye onyeisi ndị mmụọ ozi. Na July 2013 o doro Vatican nsọ maka nchedo St. Michael na St. Joseph, n'ihu Pope Emeritus Benedict XVI.
Ọ sịrị, "N'ime ido obodo Vatican City nsọ nye Maịkel Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi, a na m arịọ ya ka ọ gbachitere anyị n'aka ajọ onye ahụ ma chụpụ ya," ka o kwuru, mgbe ọ gọzisịrị akpụrụ akpụ nke onyeisi ndị mmụọ ozi na Vatican Gardens.
Ozi popu zigaara ndị Fada Michael bụ agbasaala ụbọchị na-eme emume Mass maka Vatican City State Gendarmerie Corps, na mmemme nke emume St. Michael, onye nchebe na onye na-echekwa ahụ na-elekọta nchekwa na Vatican, nke dabara na September 7. 29.
Onye nsọ a bụkwa onye nchebe nke ndị uweojii na-ahụ maka ndị uwe ojii, ndị uweojii na-ahụ maka ndị isi obodo, nke na-arụ ọrụ na gburugburu St. Peter's Square.
N'ime ofufe ezighi ezi na Mass, nke emere na St. Peter's Basilica, Pope Francis kelere ndị otu gendarmerie maka ọrụ ha.
Ọ sịrị: “N’ozi, mmadụ anaghị emehie ihe, n’ihi na ije ozi bụ ịhụnanya, ọ bụ ọrụ ebere, ọ dịkwa nso. Ọrụ bụ ụzọ nke Chineke họpụtara n'ime Jizọs Kraịst iji gbaghara anyị, ịtụgharị anyị. Daalụ maka ọrụ gị, ma na-aga n'ihu, mgbe niile, gị na ịdị umeala n'obi a siri ike nke Jesu Kristi ziri anyị “.
Na Mọnde, popu zutere na Vatican na ndị otu na-ahụ maka nchekwa ọha, ngalaba nke ndị uweojii na-ahụ maka ichebe popu mgbe ọ gara na mpaghara Italy, yana ịche St. Peter's Square.
Nzukọ ahụ mere akara ncheta afọ iri asaa na ise nke ndị nyocha ahụ. Popu ahụ kwuru na e hiwere ozu ahụ na 75 n'etiti "mberede mba" na followingtali mgbe ndị Nazi nwụsịrị.
"Ana m ekele gị nke ukwuu maka ọrụ gị dị oke ọnụ, nke e ji ịdị uchu, ọrụ aka na mmụọ ịchụ onwe onye n'àjà," ka popu kwuru. "Karịsịa, enwere m mmasị na ndidi ị na-enwe n'imeso ndị si nzụlite na ọdịbendị dị iche iche na - ana m amaja - n'iso ndị ụkọchukwu na-emekọ ihe!"
Ọ gara n'ihu: “Ekele m na-agbasokwa nraranye unu nyeere m isoro m gaa njem Rom na ileta ndị dayọsis ma ọ bụ ógbè ndị dị n'intali. Ọrụ siri ike, nke chọrọ ezi uche na nguzozi, ka njem ndị Pope ghara ịkọwa nkọwa ha nke zutere ndị nke Chineke ”.
O kwubiri, si: ka Onye nwe anyi gozie gi dika naani Ya maara etu aga esi eme ya. Ka onye nnochite anya gi, St. Michael onye isi ndi mmụọ ozi, chebe gị na Nwanyị a gọziri agọzi na-eche gị na ezinụlọ gị nche. Ka ngozi m soro gi.
Nke gara aga Post Gara aga post:Oziọma taa 29 Septemba 2020 na okwu Pope Francis
Next Post → Post ozo:Nkwupụta na ekpere nye ndị isi ndị mmụọ ozi Michael, Gabriel, Raphael